Leviticus 13 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Akwankyerɛ a ɛfa kwata ho (1-46)
Kwata a ɛtotɔ ataade mu (47-59)
13 Yehowa toaa so ka kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ: 2 “Sɛ biribi tɔ obi honam* ani na ɛhyɛ nsu anaa ɛhɔ twintwam anaa ɛsoa na edidi ne honam mu ma ɛbɛyɛ sɛ kwata*+ a, ɛsɛ sɛ wɔde no ba ɔsɔfo Aaron anaa ne mma a wɔyɛ asɔfo no mu baako anim.+ 3 Ɛsɛ sɛ ɔsɔfo no hwɛ yare a ayɛ ne honam ani no. Sɛ nwi a ɛwɔ baabi a ɛhɔ asoa no ayɛ fitaa na ɛte sɛ nea ade a ahon no no adidi kɔ ne honam mu a, ɛnde ɛyɛ kwata. Ɔsɔfo no nhwɛ na ɔnkyerɛ sɛ ne ho ntew. 4 Nanso sɛ baabi a asoa no yɛ fitaa na ennidi nkɔɔ ne honam mu na ɛhɔ nwi nyɛɛ fitaa a, ɔsɔfo no mfa onii no nkutoo nkosie baabi nnanson.+ 5 Ɛda a ɛto so ason no ɔsɔfo no nhwɛ no, na sɛ ohu sɛ nea ayɛ no no, nea ɛte ara na ɛte, na sɛ ɛntrɛwee ne honam mu a, ɛnde ɔsɔfo no nsan mfa no nsie nnanson. 6 “Ɛda a ɛto so ason no, ɔsɔfo no nsan nhwɛ no, na sɛ nea atɔ ne ho no ahyew na ɛntrɛwee ne honam ani a, ɛnde ɔsɔfo no nkyerɛ sɛ ne ho tew.+ Ɛyɛ ntwintwamee bi kɛkɛ. Ma onii no nhoro n’ataade na ne ho ntew. 7 Na sɛ ɔsɔfo no kyerɛ sɛ ne ho tew na akyiri yi ntwintwamee* no trɛw wɔ ne honam ani a, ɔnsan mmra ɔsɔfo no anim bio.* 8 Ma ɔsɔfo no nhwɛ, na sɛ atrɛw wɔ ne honam ani a, ɛnde ɔnkyerɛ sɛ ne ho ntew. Ɛyɛ kwata.+ 9 “Sɛ kwata yɛ obi a, wɔmfa no mmra ɔsɔfo no anim. 10 Ɔsɔfo no nhwɛ,+ na sɛ ohu sɛ nsoa fitaa bi asi ne honam ani na ɛhɔ nwi ayɛ fitaa, na baabi a asoa no apae ayɛ kuru+ a, 11 ɛyɛ kwatanini na ayɛ ne honam ani; ɔsɔfo no nkyerɛ sɛ ne ho ntew. Ɛnsɛ sɛ ɔde no kosie,+ efisɛ ne ho ntew. 12 Na sɛ ɔsɔfo no hwɛ na ohu sɛ kwata no apue afi were no mu na akata onii no honam nyinaa, efi ne tirim kosi ne nan ase, 13 na ɔsɔfo no hu sɛ kwata no akata ne honam nyinaa a, ɛsɛ sɛ obu onii no sɛ ne ho tew.* Ne nyinaa adan fitaa, enti ne ho tew. 14 Nanso sɛ ɛyɛ kuru a, ne ho rentew. 15 Sɛ ɔsɔfo no hu sɛ ayɛ kuru a, ɔnkyerɛ sɛ ne ho ntew.+ Ekuru no ho ntew. Ɛyɛ kwata.+ 16 Na sɛ kuru no wu na ɛhɔ san yɛ fitaa a, ɔnsan nkɔ ɔsɔfo no hɔ. 17 Ɔsɔfo no nhwɛ no,+ na sɛ baabi a ɛyɛɛ kuru no adan fitaa a, ɛnde na onii no ho tew, enti ɔsɔfo no nkyerɛ sɛ ne ho tew. 18 “Sɛ pɔmpɔ bɔ obi na ɛkɔ, 19 na sɛ biribi fitaa bi besi pɔmpɔ no ananmu anaa ɛhɔ soa yɛ fitaa na anim dodow kakra a, ɔmfa ne ho nkɔkyerɛ ɔsɔfo no. 20 Sɛ ɔsɔfo no hwɛ+ na ayɛ te sɛ nea adidi kɔ honam no mu, na ɛhɔ nwi ayɛ fitaa a, ɔsɔfo no nkyerɛ sɛ ne ho ntew. Ɛyɛ kwata na apue afi pɔmpɔ no mu. 21 Nanso sɛ ɔsɔfo no hwɛ na wanhu nwi fitaa biara wɔ hɔ, na nea ahon no no nso nnidi nkɔɔ honam no mu na ahyew a, ɔsɔfo no mfa ɔno nkutoo nkosie baabi nnanson.+ 22 Na sɛ efi ase trɛw wɔ ne honam ani a, ɔsɔfo no nkyerɛ sɛ ne ho ntew. Ɛyɛ yare. 23 Nanso sɛ nea atɔ ne ho no antrɛw a, ɛnde ɛyɛ baabi a na pɔmpɔ no wɔ ara na ɛhɔ asoa. Ɔsɔfo no nkyerɛ sɛ ne ho tew.+ 24 “Sɛ nso obi hyehye na kuru no anwu anwie na sɛ ɛhɔ soa ma anim dodow anaa ɛho nyinaa yɛ fitaa a, 25 ɔsɔfo no nhwɛ. Sɛ ɛba sɛ ɛhɔ nwi adan fitaa na ɛte sɛ nea nsoa no adidi kɔ ne honam mu a, ɛyɛ kwata na apue afi kuru no mu. Ɔsɔfo no nkyerɛ sɛ ne ho ntew, efisɛ kwata ayɛ no. 26 Nanso sɛ ɔsɔfo no hwɛ na wanhu nwi fitaa biara wɔ baabi a nsoa no wɔ, na sɛ ennidi nkɔɔ honam no mu na ahyew a, ɛnde ɔsɔfo no mfa ɔno nkutoo nkosie baabi nnanson.+ 27 Ɛda a ɛto so ason no, ɔsɔfo no nhwɛ no. Sɛ ohu sɛ ampa ara atrɛw wɔ ne honam ani a, ɔsɔfo no nkyerɛ sɛ ne ho ntew. Ɛyɛ kwata. 28 Nanso sɛ ɛhɔ te sɛ nea ɛte na ɛntrɛwee ɔhonam no mu na ahyew a, ɛkyerɛ sɛ ɛhɔ na asoa kɛkɛ. Ɔsɔfo no nkyerɛ sɛ ne ho tew, efisɛ ɛhɔ na asoa. 29 “Sɛ biribi tɔ ɔbarima anaa ɔbea bi ti ho anaa n’abogye ho a, 30 ɛsɛ sɛ ɔsɔfo no hwɛ.+ Sɛ ɛte sɛ nea adidi kɔ ne honam mu na ɛhɔ nwi no adodow na bebree atutu a, ɔsɔfo no nkyerɛ sɛ ne ho ntew. Ɛyɛ yare na ayɛ ne ti ase anaa n’abogye. Kwata na ayɛ ne ti ho anaa n’abogye. 31 Nanso sɛ ɔsɔfo no hwɛ na ohu sɛ yare no nnidi nkɔɔ honam no mu na nwi tuntum biara nni hɔ a, ɛnde ɔsɔfo no mfa onii no nkutoo nkosie baabi nnanson.+ 32 Ɛda a ɛto so ason no, ɔsɔfo no nsan nhwɛ yare no, na sɛ nea atɔ ne ho no ntrɛwee, na sɛ nwi no nnodowee, na yare no nnidi nkɔɔ honam no mu a, 33 ɛnde onii no nyi ne ti anaa n’abogyesɛ, nanso ɛnsɛ sɛ oyi baabi a ade atɔ no. Ma ɔsɔfo no mfa onii no nkosie baabi nnanson bio. 34 “Afei da a ɛto so ason no, ɔsɔfo no nsan nhwɛ baabi a yare no wɔ no. Sɛ yare a aka ne ti ne n’abogye no ntrɛwee na sɛ ennidi nkɔɔ ne honam mu a, ɛnde ɔsɔfo no nkyerɛ sɛ ne ho tew. Ɔnhoro n’ataade na ne ho ntew. 35 Nanso sɛ ɔsɔfo no ka sɛ ne ho tew na akyiri yi, yare no trɛw wɔ ne honam ani a, 36 ɔsɔfo no nsan nhwɛ. Na sɛ ohu sɛ yare no atrɛw wɔ ne honam ani a, ɛho nhia sɛ ɔhwɛ sɛ ɛhɔ nwi no adodow; nea ɛkyerɛ ara ne sɛ ne ho ntew. 37 Nanso sɛ ɔhwɛ na ohu sɛ yare no ntrɛwee na nwi tuntum afuw wɔ hɔ a, ɛkyerɛ sɛ yare no kɔ. Ne ho tew, enti ɔsɔfo no nkyerɛ sɛ ne ho tew.+ 38 “Sɛ nsoa mfitamfitaa bi bɛtotɔ ɔbarima anaa ɔbea bi honam* ani a, 39 ɔsɔfo no nhwɛ.+ Sɛ ohu sɛ nsoa mfitamfitaa a atotɔ ne honam ani no ahyew kakra a, ɛkyerɛ sɛ nea atotɔ ne honam ani no nyɛ hu. Ne ho tew. 40 “Sɛ ɔbarima bi ti so pa a, ne ho tew. 41 Sɛ ne ti so apa fi ne moma so akosi n’apampam a, ne ho tew. 42 Nanso sɛ biribi fitaa a adodow bɛtɔ n’apampam a apa no anaa ne moma so a, ɛyɛ kwata na apue wɔ n’apampam anaa ne moma so. 43 Ɛsɛ sɛ ɔsɔfo no hwɛ no, na sɛ ohu sɛ nsoa fitaa a adodow na abɛtɔ n’apampam anaa ne moma so te sɛ kwata a ɛwɔ ne honam ani a, 44 ɔyɛ kwatani. Ne ho ntew. Nea abɛtɔ n’apampam anaa ne moma so nti, ɛsɛ sɛ ɔsɔfo no kyerɛ sɛ ne ho ntew. 45 Ɛsɛ sɛ nea kwata wɔ ne ho no suan n’ataade mu na ogyaw ne ti nwi saa ara. Afei ma ɔnkata ne mfemfem so na ɔnteɛm sɛ, ‘Me ho ntew, me ho ntew!’ 46 Nna a yare no wɔ ne ho nyinaa, ne ho rentew. Esiane sɛ ne ho ntew nti, ɔbɛtew ne ho akɔtena baabi wɔ asoɛe no akyi.+ 47 “Sɛ biribi a ayɛ sɛ kwata totɔ ataade a wɔde aboa nwi ayɛ anaa nea wɔde nwera ayɛ mu, 48 anaasɛ ɛtotɔ hama a wɔde nwene nwera anaa kuntu mu, anaasɛ ɛtotɔ aboa nhoma anaa biribi a wɔde nhoma ayɛ mu, 49 na sɛ biribi a ɛte sɛ akokɔsrade anaa biribi a ɛbere totɔ ataade, nhoma, hama, nwentama, anaa biribiara a wɔde nhoma ayɛ mu a, ɛyɛ kwata, na ɛsɛ sɛ wɔde kyerɛ ɔsɔfo no. 50 Ɔsɔfo no nhwɛ na ɔmfa ade a kwata wom no nsie nnanson.+ 51 Ɛda a ɛto so ason no, sɛ ohu sɛ kwata no atrɛw wɔ ataade, hama, nwentama, anaa nhoma mu (ɛmfa ho nea wɔde nhoma no yɛ) a, ɛyɛ kwata a etumi san, na ɛho ntew.+ 52 Ɛsɛ sɛ ɔhyew ataade, hama, nwentama anaa biribiara a wɔde nhoma ayɛ a kwata wom no, efisɛ ɛyɛ kwata a etumi san. Ɛsɛ sɛ wɔde ogya hyew. 53 “Nanso sɛ ɔsɔfo no hwɛ na ohu sɛ yare no ntrɛwee wɔ ataade, hama, nwentama, anaa biribiara a wɔde nhoma ayɛ no mu a, 54 ɔsɔfo no mma wɔnhoro ade a yare wom no na ɔnsan mfa nsie nnanson. 55 Sɛ wɔhoro no yiye na akyiri yi ɔsɔfo no hwɛ na sɛ mpo nea atotɔ mu no ntrɛwee nanso ɛnkɔe a, ɛho ntew. Ɛsɛ sɛ wohyew wɔ ogya mu, efisɛ yare no na awewe emu anaa akyi. 56 “Nanso sɛ wɔhoro no yiye na akyiri yi ɔsɔfo no hwɛ na ohu sɛ nea atotɔ mu no rekɔ a, ɔntew ɛhɔ mfi ataade, nhoma, hama, anaa nwentama no mu. 57 Nanso sɛ ɔsan hu wɔ ataade, hama, nwentama, anaa biribiara a wɔde nhoma ayɛ no mu baabi foforo biara a, ɛkyerɛ sɛ ɛretrɛw, enti biribiara a wobehu yare no wom no, fa ogya hyew.+ 58 Na sɛ wɔhoro ataade, hama, nwentama, anaa biribiara a wɔde nhoma ayɛ no wie na wohu sɛ nea atotɔ mu no afi mu a, wɔnsan nhoro bio na ama ɛho atew. 59 “Eyi ne mmara a ɛwɔ hɔ bere a kwata atotɔ ataade a wɔde aboa nwi ayɛ, nea wɔde nwera ayɛ, hama, nwentama, anaa biribiara a wɔde nhoma ayɛ mu no. Eyi na wɔde bɛkyerɛ sɛ ɛho tew anaa ɛho ntew.”
^ Nt., “ne honam were.”
^ Hebri asɛmfua a wɔkyerɛ ase “kwata” no kyerɛ nneɛma pii; ebetumi akyerɛ honam ani nyarewa ahorow a etumi san. Ebetumi nso ayɛ nneɛma a ɛtotɔ ntaade mu anaa adan ho.
^ Anaa “nea atɔ ne ho.”
^ Anaa “ne mprenu so.”
^ Anaa “ne yare no nyɛ nsanyare.”
^ Nt., “honam were.”